Raha ny filazan'i Bloomberg, ny tsy fahampian'ny singa dia handrava ampahefatry ny tokony ho firaketana ho an'i Apple | Vaovao IPhone
Raha ny filazan'i Bloomberg, ny tsy fahampian'ny singa dia handrava ampahefatra izay noheverina ho firaketana ho an'i Apple
Mark Gurman avy any Bloomberg, dia manondro amin'ny tatitra farany nataony fa Apple dia mety manana ampahefatra somary sarotra noho ny tsy fahampian'ny fitaovana, raha raisina fa io no vanim-potoana fivarotana tsara indrindra ho an'ny orinasa.
Marina tanteraka fa ny telo volana farany amin'ny taona ho an'ny Apple sy ho an'ny ankamaroan'ny orinasa dia matetika ilay mahery. Amin'ity tranga ity, Apple dia mampiseho ihany koa ny fitaovany manandanja amin'ny volana septambra, noho izany ny tapany faharoa amin'ny taona no lakilena. Amin'izao fotoana izao ary hoy i Gurman, ny tsy fahampian'ny fitaovana dia mandrahona ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra an'i Apple izay tokony hamaky firaketana.
Ny tatitry ny Bloomberg dia manondro fa andro vitsivitsy taorian'ny nanolorana ny iPhone 13 vaovao dia nanomboka nihazakazaka izy ireo ary ny firaketana dia tsy nitombo firy tamin'ity fotoana ity, raha jerena fa iray volana lasa izay no niseho ity hetsika ity. Ny vokatr'ilay domino dia ampitandreman'i Gurman sy ireo mpandinika hafa, ary ny tsy fahampian'ny tahiry dia zavatra hitantsika fa mitranga koa amin'ny MacBook Pro natolotra vao haingana ny Apple Watch vaovao na iPad mini iPad sy iPad fahasivy faha-11, nefa koa misy fitaovana taloha ao amin'ny katalaoginy toa ny iPhone 12, iPhone 24 na iMac XNUMX-inch.
Ny naoty navoaka tamin'ity haino aman-jery ity dia manondro ihany koa fa ny singa sasany amin'ireo fitaovany dia tena sarotra ny mahazo azy, ao anatin'izany ny chips avy amin'ny Broadcom sy Texas Instruments. Mahatonga ny fangatahana hihoatra ny famatsiana izany Ary avy eo dia misy ny fahatarana amin'ny fandefasana sy ny olana amin'ny fotoana akaiky ny fiantsenana fialantsasatra.
Etsy ankilany, misy ny AirPods fahatelo, ny HomePod mini, AirTags na koa ny Apple TV izay manana tahiry be dia be izy ireo ary vonona ny handefa haingana. Ireo vokatra ireo dia mety ho lasa singa lehibe ho an'ireo mitady ny vokatra sonia Cupertino mandritra ny fialantsasatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Raha ny filazan'i Bloomberg, ny tsy fahampian'ny singa dia handrava ampahefatra izay noheverina ho firaketana ho an'i Apple
Ny hetsika ao amin'ny App Store dia ho hita amin'ny herinandro ambony
Azo alaina izao ao amin'ny Apple TV +, Invasion, andiany vaovao momba ny siansa foronina Apple